Izindaba - I-PE multi-layer pipe extrusion line
PE multi-ungqimba ipayipi extrusion umugqa ungenza 2, 3, 4, 5 izingqimba zamapayipi ngemishini eminingi eyinkimbinkimbi eyakhiwe ngomshini.
Ekhiqizweni kwepayipi elinemigqa eminingi, izendlalelo eziningi, izinto eziningi, kuba nzima kakhulu ukukhiqiza. Izendlalelo ezahlukahlukene nazo zizohluka ngokwehlukile. Ngamapayipi amathathu wesendlalelo, kunezinhlobo ezimbili. I-ABA ne-ABC zidinga ama-extruders amabili nantathu angashadile wokukhipha. Okwemishini, i-ABC inzima kakhulu futhi izindleko zemishini ziphakeme kakhulu kune-ABA.
I-PE multi-ungqimba ipayipi isetshenziselwa kakhulu ukuhanjiswa kwamanzi nomsele, ukunisela kwezolimo, njll ngezinto ezihlanganisiwe ezahlukahlukene kanye nezendlalelo, kunganciphisa izindleko, kukhuphule amandla omzimba futhi kwandise i-antioxidant.
Okomugqa ojwayelekile wokukhiqizwa kwepayipi, isici esikhulu sokusebenza kahle komugqa wokukhiqiza ipayipi ukusebenza kahle okukhulu nokonga amandla. Ngaphansi kwesisekelo somthamo ofanayo we-extrusion, isikulufa sincane, amandla kagesi aphansi, futhi isiza nomsebenzi kusindiswa kakhulu.
Uma kuqhathaniswa nenkathi efanayo yesikhathi esifanayo, okukhipha okungu-60/30 okujwayelekile kwe-screw extruder kungu-100kg kuphela ngehora, kanti amandla we-extrusion wokusebenza kahle okungu-60/38 asebenza kahle nge-screw eyodwa angaphezulu kwama-350 kg ngehora, okulingana nokusebenza kahle okuthathu nengxenye. Ukusetshenziswa kwamandla izikhathi ezi-2.8 kuphela zalowo we-extruder ojwayelekile, kanti isilinganiso sokusetshenziswa kwamandla sikhuphuke cishe ngama-25%. Ukusetshenziswa kwamandla kuncishisiwe kakhulu, ukusebenza komkhiqizo kuthuthukisiwe, futhi isikhala sokukhiqiza sinciphile kakhulu.
PE multi-ungqimba ukukhiqizwa ipayipi umugqa angakhiqiza ipayipi ububanzi ka 20-1200mm, kanye Ukucaciswa ephezulu kahle olulodwa isikulufa extruder ikakhulukazi 50/38, 60/38, 75/38, 90/38120/38150/38. umthamo we-extrusion ungama-200-1200kg / h, futhi i-extruder motor ingama-55kw-550kw, ukuze kuhlangatshezwane nezidingo zamakhasimende anezingqimba ezihlukene zamapayipi.